Nagu saabsan | Brocade Smart Space Technology Co., Ltd.
Brocade Smart Space Technology Co., Ltd. waa shirkad muhiim ah oo ka diiwaan gashan Gobolka Sichuan, Shiinaha, waxayna qayb ka tahay barnaamijka maalgashiga weyn ee aaga Tech Tech ee Chengdu. Alaabtayadu inta badan waxa ku jira beddelayaal fiidiyoo qeexan oo qeexan iyo qaybiyeyaal, iyo qeexitaan sare khasaaro la'aan alaabada gudbinta waqtiga-dheer. Alaabteenna waxaa had iyo jeer loo adeegsadaa HDMI-ga wax soo saarka maqalka iyo muuqaalka ah iyo baridda multimedia, shirarka fiidiyowga, shaashadaha waaweyn, bandhigyada, cilmi baarista sayniska, iyo duubista filimka iyo telefishanka Maalgashigayaga koowaad waa RMB 500 milyan, iyadoo wadarta maalgashiga ugu dambeyn ay gaareyso RMB labo bilyan.
Sida shirkad ay wada leeyihiin shirkadda Brocade AI Group, waxaan leenahay tiknoolajiyad madax-bannaan oo madax-bannaan oo madax-bannaan, alaabooyin ikhtiraac leh, iyo karti wax soo saar leh oo R&D - iyadoo alaabteenna la soo saaray in ka badan 10 khadadka wax soo saarka si loo hubiyo in si hufan loogu qaybiyo dadka isticmaala adduunka oo dhan. Kooxdayada khubarada ahi waxay la tacaali kartaa amarrada OEM ee gaarka u ah macaamiisha waxaanan la shaqeyn karnaa tiro badan iyo yar oo amar ah.
Kooxda loo yaqaan 'Brocade Group', waa xirfadle ku takhasusay dhaqaalaha dhijitaalka ah, Brocade Group waa wakiil ka socda shirkadaha Chengdu ee Shirka Sichuan ee Gobolka Sichuan iyo mashruuc horumarineed oo weyn oo dhanka maalgashiga ah oo ka socda Aagga Tiknoolajiyadda Sare ee Chengdu. Cloud Alibaba wuxuu si rasmi ah u oggolaaday lamaanaha bey'ada. Iyada oo ku saleysan tikniyoolajiyadda iyo maalgashiga istiraatiijiga ah, waxaad xoogga saartaa horumarinta softiweerka iyo teknoolojiyada qalabka sida alaabada casriga ah, softiweerka nidaamka xogta weyn, Internetka Waxyaabaha, iwm, si fiican u baro xuquuqda lahaanshaha aqooneed ee madaxbannaan ee aagagga muhiimka ah, iyo iyada oo loo marayo silsiladda warshadaha kor iyo hoos. qaabeynta, sida ku xusan magaalooyinka caqliga badan, waxbarashada caqliga leh, Dhaqanka caqliga badan iyo hal abuurka, meel caqli gal ah, xaalad deg deg ah oo xariif ah, maaliyad caqli gal ah iyo qeybaha kale ee suuqyada looga baahan yahay si loo abuuro alaabooyin iyo adeegyo codsi la xiriira, loona dhiso shirkad heer sare ah oo hal abuur leh iyo caqli macmal ah. nidaamka deegaanka.
Kooxda Brocade waxay u hoggaansameysaa dhaqanka shirkadaha ee hal-abuurnimada, wax-ku-oolnimada, pragmatism iyo daacadnimada, waxayna go'aamisay meeleynta shirkadaha "caalamiyeynta, ka-faa'iideysiga, warshadeynta iyo bey'ada", oo looga gol leeyahay in lagu dhiso shirkad heer-sare ah oo hal-abuur leh.
Cusbooneysiinta farsamada, hal-abuurka maaraynta, hogaaminta mustaqbalka
Raadi runta xaqiiqda ah, ku tababar naftaada, oo si adag u shaqee
Si dhakhso leh oo sax ah, wada shaqeyn kooxeed, laba jibaar natiijada natiijada nuskeed
Daacad iyo aaminaad, iswaafaqsan banaanka iyo gudaha, aaminka aduunka
Dr. Sha Guo Khabiir Sirdoonka Cilmiga ah, Gudoomiyaha Kooxda
Ka qalin jabiyay Jaamacadda Tsinghua (Bachelor iyo Master) iyo FIU (Ph.D.) oo ku taal Mareykanka. Macallinkiisu waa Professor Sun Jiaguang, oo ah aqoonyahan ka tirsan Akadeemiyada Shiinaha ee Sayniska. Dr. Sha Guo waa khabiir ku takhasusay xogta wuxuuna ku daabacay ku dhowaad 30 waraaqo tacliimeed joornaalada caalamiga ah ee ugu sareeya iyo shirarka sida IEEE. Focus on sirdoonka macmalka ah, xogta weyn iyo barnaamijyadooda iyo hal-abuurnimo. In ka badan 20 sano oo maamul sare ah iyo khibrad hawlgal shirkado caalami ah, aasaasaha NUCOM, oo caan ku ah ka shaqeynta isgaarsiinta Mareykanka, wuxuu leeyahay iibin sanadle ah oo ka badan 100 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Wuxuu mar ka shaqeeyey Xarunta Cilmi Baarista ee IBM ee ku taal Mareykanka, wuxuu ahaa kooxdii ugu horreysay ee ganacsato ee warshadaha Internetka, sidoo kale wuxuu la shuraakoobay hay’ado badan oo maalgeliya.
Hao Fang, Madaxa Kooxda
Waxay ka qalin jabisay Jaamacadda Peking, waxay aasaastay oo ay maalgashatay shirkado warshado badan, waxayna haysataa 21 sano oo khibrad ganacsi iyo khibrad maarayn ganacsi ah, oo ay ku jiraan waxbarashada, nashqadeynta warshadaha, hal abuurka farshaxanka, tikniyoolajiyadda sare, ganacsiga caalamiga ah, iwm.
Sagaashamaadkii, waxay ka shaqeysay Machadka Cilmi-baarista Horumarinta Warshadaha Macluumaadka ee Shiinaha ee Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyada Warfaafinta iyada oo madax ka ahayd naqshadeynta hal-abuurka. Waxay aasaastay Faransiiska SACAVIN Knights iyo Jaamacadda Peking Philharmonic Club.
Fahamka Kooxda Brocade
Dhamaan Fursadaha adiga
Iyada oo ku saleysan tiknoolajiyada iyo maalgashiga istiraatiijiga ah, diiradda saar cilmi baarista iyo horumarinta tiknoolajiyada iyo tiknoolajiyada qalabka sida alaabada casriga ah iyo barnaamijyada nidaamka software ee xogta weyn, hanashada xuquuqda hantida madax-bannaan ee madax-bannaan ee aagagga muhiimka ah, iyo iyada oo loo marayo qaab-dhismeedka silsiladaha kor u kaca iyo hoose. iyada oo loo eegayo magaalooyinka caqliga badan, waxbarashada caqliga badan, baahida suuqyada casriga ah ee qaybaha hoose sida hal abuurka dhaqanka, meel caqli gal ah, iyo xaalad deg deg ah oo dhijitaal ah si loo abuuro alaabooyin iyo adeegyo la xidhiidha oo la xidhiidha, loona dhiso shirkad heer caalami ah oo ikhtiraac cusub iyo nidaam warshadeed sirdoon farsamo.
Kooxda loo yaqaan 'Brocade Artificial Intelligence Group' waa saxiixa wakiilka shirkadaha Chengdu ee Shirka Sichuan ee Gobolka Sichuan Shirka Ganacsiga iyo mashruuc horumarineed oo weyn oo dhanka maalgashiga ah oo ka socda Aaga Tiknoolajiyadda Sare ee Chengdu. Iyadoo loo marayo hal-abuurnimo madax-bannaan oo tiknoolajiyada aasaasiga ah, oo leh faa'iidooyin wax ku ool ah ee ilaha warshadaha, ilaha kanaalka, iyo kanaalada caasimadda, baahida loo qabo baahida suuqa, iyo codsiyada warshadaha sida hadafka, Kooxda ayaa aasaas adag u dhigtay horumarka degdegga ah iyo iskaashiga guul-wadaagga ah .
Brocade wuxuu muhiimad weyn siinayaa istiraatiijiyadda kartida. In kabadan 95% kooxda maareynta aasaasiga ah ayaa ka qalin jabiyay jaamacadaha muhiimka ah. In kabadan 50% waa PHDS. In ka badan boqolkiiba 30 waa dad soo noqday.
Tirada dhakhaatiirta iyo sayidyadu kama yarayn 50%
Wax aan ka yarayn 95% ardayda haysta shahaadada koowaad ama ka sare
Tirada aqoonyahannada, borofisarrada iyo kormeerayaasha takhtarka kama yarayn 5%
Tirada dadka soo noqday waa inaysan ka yaraan 30%
Brocade Group waa saxiixa wakiilka shirkadaha Chengdu ee Shirka Sichuan ee Shirka Sichuan iyo mashruuc horumarineed maalgashi oo weyn oo ka socda Aaga Tiknoolojiyadda Sare ee Chengdu. Iyada oo loo marayo hal-abuurnimo madax-bannaan oo tiknoolajiyada asaasiga ah, oo leh faa'iidooyin wax ku ool ah oo ku saabsan ilaha warshadaha, ilaha kanaalka, iyo kanaalada caasimadda, baahida loo qabo baahida suuqa, iyo codsiyada warshadaha sida hadafka, Kooxda ayaa aasaas adag u dhigtay horumarka degdegga ah iyo iskaashiga guul-wadaagga ah .